Dagaalka Culus oo haatan kaqeyb Qaadanayan Diyaarado Dagaalka oo kasocda Gobolk Gedo | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Thursday, May 23rd, 2013	Home
Dagaalka Culus oo haatan kaqeyb Qaadanayan Diyaarado Dagaalka oo kasocda Gobolk Gedo
Number of View :1325Sida ay sheegayan wararka aan haatan kaheleyno Gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi oo kasocda Dagaal aad u Culus kasoo Udhaxeeyo Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo kabayana kuwa Raaskamboonin iyo Kooxda Shabaab.
Dagaalkan ayaa si toos ah oga socda Degaanada u dhow dhow Faax faaxdhuun kasoo lasheegay in la isku adeygsanaayo hubka nuucyadii kale duwan ayadoo mararka qaar lamaqlaayo rasaasta waa weyn oo akdhacda Garbaha.
Dagaalkan ayaa lasheegay in ay kaqeyb galayaan Diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya kuwaasi oo lasheegay in rasaas kuridayaan Fariisimaha shabaab oga suganayihin halkaais waxaan alasheegay in Gantaalo ku tuureyn.
lama oga wali wax qasaaro ah oo ka dhashay Dagaalka wali soconaya mana jiraan wax war ah oo kasoo baxay dhinacyada dagaalama ee Al-Shabaab iyo Ciidamada kale ee Huwanta ah ee isku baheestay la Dagaalanka Al-Shabaab.
Ugu Danbeyntii Shabaab iyo Dowlada iyo waliba Xulufadeeda ayaa haatan isku heesto qeybo katirsan jubooyinka ayadoo shabaab u muuqato kuwa kusoo bandhigeyso awoodeyda ciidan wallow dowlada sheegto in shabaab awoodeeda ay bur burtay.